Ibsa dhaabbata Meta /Feesbuukii/ waa’ee tajaajilasaa Itoophiyaa keessaa – ኢትዮጵያ ቼክ
Ibsa dhaabbata Meta /Feesbuukii/ waa’ee tajaajilasaa Itoophiyaa keessaa
Feesbuukiifi miidiyaalee hawaasummaa biroo kan bulchu dhaabbatni Meta tajaajila Itoophiyaa keessatti kennu ilaalchisee tibbana ibsa bal’aa maxxansee jira.
Dhaabbatni Meta waggoota lamaan darbaniif Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun hojjechaa turuufi haasaawwan jibbiinsaa afaanoota gurguddoo biyyattii keessaatiin barreeffaman to’achuuf dandeettiisaa gabbifachaa turuu himeera.
“Waggaa lama dura Itoophiyaa tarree biyyaalee walitti bu’iinsafi hookkaraaf saaxilamoo ta’an keessa galchineerra” kan jedhu ibsi dhaabbata Meta, nageenya namootaa eeguuf tarsiimoowwan yeroo dheeraafi furmaatawwan hatattamaa irratti hojjechaa turuu hima.
Haaluma kanaan fayyadamtootasaa Itoophiyaa keessaa ilaalchisee dhimmoota sadi irratti akka xiyyeefatu himeera. Isaanis: maxxansawwan imaammatasaa cabsan haquu, mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu namootaa kabajuufi nageenyi namootaa intraneetii irrattis ta’e intarneetiin ala akka eeggamu gargaaruu akka ta’e himeera.
Haa ta’u malee biyyattii keessatti afaanootni garagaraa kan dubbataman ta’uun wantoota kunneen haalaan hojiirra oolchuuf qormaata akka itti ta’e kan himu Metan, yeroo ammaatti maxxansawwan afaan Amaaraa, Afaan Oromoo, Somaaliifi Tigriffaan maxxanfaman sakatta’aa akka jiru beeksiseera.
Kana malees tekinoloojii haasaawwan jibbiinsaa Afaan Amaaraafi Afaan Oromoon maxxanfaman adda baasuu danda’u akka qabus himeera.
Hojiilee hojjetaman kunneeniinis Caamsaa hanga Onkololeessa 2021 maxxansawwan Feesbuukiifi Instaagiraama haasaa jibbiinsaa of keessaa qaban 92,000 irratti tarkaanfii fudhadheera jedheera.
Ji’a Waxabajjii 2021 immoo akkaawuntiiwwan sobaa namootafi gareelee siyaasaa morkattoota irratti xiyyeeffachuun maxxansaa turan haquusaa beeksiseera.
Dabalataan Guraandhala 2021 immoo akkaawuntiiwwan miidiyaalee hawaasummaa biyya Ijiptii socho’anfi Itoophiyaa, Sudaanfi Tarkii irratti xiyyeeffatan haquu isaa Metan himeera.
Dhaabbatni Meta haala waqtaawaa Itoophiyaafi filannoo bara darbeen walqabatee tarkaanfiiwwan dabalataa fudhachuus hima.
Tarkaanfilee kunneen keessaayis qabiyyeewwan miidiyaalee hawaasummaa hokkara kakaasan baay’inaan akka hin qoodamne gochuu akkasumas maxxansawwan namootni meeshaa waraanaa akka kaasan kakkaasanfi odeeffannoowwan sobaa miidhaa geesisan haquu kunneen jedhan ni argamu.
Kana malees dhaabbatichi qaamolee miti mootummaa hookkara kakkaasan /Violent Non-State Actors/ jedhe irratti tarkaanfii ugguraa fudhachuusaa kan hime yemmuu ta’u, qaamolee kunneen keessaa Waraanni Bilisummaa Oromoo /WBO/ fi Abbaan Torbee akka argaman himeera.
Dabalataan dhaabbatni Meta maamiltootasaa Itoophiyaa keessa jiraniif tajaajila haaraa kan namootni icciitii akkaawuntii miidiyaa hawaasummaa isaanii ittiin eegatan ‘Lock Profile’ jedhamu hojiirra olchuusaas beeksiseera.
Tajaajilli kun namootni suuraa pirofaayilii nama hiriyaa isaanii hintaane guddisanii akka hin ilaalle, akka hin qoodnefi hin kuusne /‘download’ hin goone/ taasisa.
Kana malees dhaabbatichi nageenya fayyadamtootasaa Itoophiyaa keessaa mirkaneessuuf maamiltootasaa akkasumas michuuwwansaafi dhaabbilee miti mootummaa waliin hojjechuu akka itti fufu himeera.
Gama biraatiin dhaabbatni Meta /Feesbuukii/ facaatii haasaawwan jibbiinsaafi odeeffannoowwan sobaa Itoophiyaa keessaa gama to’achuutiin hojii quubsaa hin hojjenne jedhamuun komiiwwan irratti dhiyaataa turuunsaanii ni yaadatama.